COVID ပြီးနောက် တစ်နေ့တာအတွင်း စွမ်းအင်တိုးမြှင့်နည်း - Sulementos Brasil
တစ်နေ့တာအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။
စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားကို မြှင့်တင်ရန် အစားအစာများ
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက် စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။
လေ့ကျင့်ရန် စွမ်းအင်ကို မြှင့်တင်နည်း
စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေသဘောထားကို မြှင့်တင်ရန် အလေ့အကျင့် ၃ ခု
စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
စွမ်းအင်တိုးမြှင့် Covid ပြီးတဲ့နေ့တွေမှာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေမှာ တက်ကြွပြီး ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပိုလုပ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့ လူတော်တော်များများရဲ့ ဆန္ဒပါပဲ။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုကြည်ညိုနေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ နားလည်တာထက် ပိုကောင်းတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။ သင်၏နေ့စဉ်အတွင်း။
ဒီကနေတဆင့် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။ အစာ? ဤစာသားကို အဆုံးအထိ လိုက်နာရန် သေချာပါစေ။ လာပါ!
တိုးမြှင့်လာသည် အင်အား ပိုတက်ကြွပြီး အကျိုးရှိတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်သူတွေအတွက် အရေးကြီးပေမယ့် နည်းလမ်းမှန်နဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ပြင်းထန်မှုမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်သူတွေအတွက် ပိုလို့တောင် အရေးကြီးပါတယ်။
တစ်နေ့တာလုံး စိတ်နေစိတ်ထားမရှိတာက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ပြေးတာ၊ လမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေ့ကျင့်ရေး ခန္ဓာကိုယ်။
Mas ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။ ဒီပြဿနာကို နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။ ပိုစွမ်းအင် တစ်နေ့တာလုံး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ နောက်အကြောင်းအရာမှာ သင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အတိအကျသိပါလိမ့်မယ်။
အရေးကြီးသော စွမ်းအင်ကို တိုးပွားစေသောအရာများ
ရရ တစ်နေ့တာ စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။ ထိရောက်သော နည်းလမ်းများစွာရှိသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးကို ပေါင်းစည်းထားရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပိုမိုတက်ကြွသောနေ့တစ်နေ့ကို အာမခံနိုင်စေရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စိတ်နေသဘောထားနှင့် လိုချင်သောပန်းတိုင်များကို အရောက်လှမ်းနိုင်ရန် လုံလောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းများ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျ ou ကြွက်သားထုထည်တက်သည် နောက်ကိုကြည့်ပါ။ အရေးကြီးသောစွမ်းအင်ကို တိုးပွားစေသောအရာက အဘယ်နည်း .
စားချင်သူများအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်တိုးမြှင့် covid ပြီးနောက်နေ့အတွင်း။
ကောင်းသော အာဟာရနှင့် သဘောထားကြီးသော ဆက်ဆံရေးကို လူအတော်များများက မမြင်ကြပေ၊ ယင်းသည် ကြီးမားသော အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် ခေါင်းစဉ်ကို ပြန်စဥ်းစားပြီး ကောင်းကောင်းစားခြင်းက သင့်တစ်နေ့တာအတွက် အရေးပါတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဘယ်လိုရနိုင်တယ်ဆိုတာ နားလည်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာ သိပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ အစာစားသူများသည် မှန်ကန်စွာအစာမစားဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူများထက် များစွာသာလွန်ကြောင်း လေ့လာမှုများက ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။
အစားအသောက် ညံ့ဖျင်းသောသူများတွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု မြန်ဆန်လာပြီး လေ့ကျင့်ခန်းအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် ခက်ခဲခြင်းသည် အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရလဒ်ကောင်းများကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။
>>> ဖတ်ရန် ပရိုတိန်းပန့်ကိန်း - သင့်အားအပြစ်ရှိသည်ဟုမခံစားရစေရန်နှင့်စားရန်အတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာချက်ပြုတ်နည်းများ။
၎င်းသည် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်သာမက အလုပ်၊ စာကျက်ခြင်းကဲ့သို့သော နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်သာဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ အကြံပြုချက်သည် တိကျသောအချိန်နှင့် စားသုံးရန် စီမံထားသော အစားအသောက်ကို အမြဲထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ အစာ အဲဒါတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်တယ်။
အကြံပြုချက်မှာ ရှုပ်ထွေးသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါသော သူများသည် တစ်နေ့တာလုံး စွမ်းအင်အပြင် သတ္တုဓာတ်နှင့် ဗီတာမင်များကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထုတ်လွှတ်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကို လေ့ကျင့်ခြင်းသည် သင်၏ စွမ်းအင်ကို တိုးမြင့်စေပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျှော့ချရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အထိုင်များသော လူနေမှုပုံစံ၏ အကျိုးဆက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သင်၏ စိတ်နေသဘောထားကို များစွာတိုးစေပြီး အကောင်းဆုံးမှာ၊ ရှုပ်ထွေးသော သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ရိုးရှင်းသောလမ်းလျှောက်ခြင်းသည် တိုးတက်မှုများကို ယူဆောင်လာပေးနိုင်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ လေ့ကျင့်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး အထူးသဖြင့် ဦးနှောက်သို့ အောက်ဆီဂျင် ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြင့်စေသည်။
ဤအရာဖြင့်၊ စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေသဘောထားကို ပိုမိုဆောင်ကြဉ်းပေးမည့် စိတ်ဓာတ်တိုးတက်မှုနှင့် အခြားသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်။
အရည်စားသုံးခြင်းသည်လည်း အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်တိုးမြှင့် နေ့ဘက်တွင်၊ အဖြစ် ရေဓာတ် ၎င်းသည် ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် စွမ်းအင်အဆင့်များအပါအဝင် သက်ရှိတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုသို့မဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် အကြံပြုချက်မှာ တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှရေ2လီတာမှ3လီတာကြား သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အမြဲတမ်း ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေရန်ဖြစ်သည်။
ရေဆာတဲ့အခါမှသာ ရေသောက်တဲ့အလေ့အထရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ဘ၀မှာ အဲဒါကိုပြောင်းလဲပြီး အရည်ပမာဏများများ နေ့စဉ်သောက်သုံးဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သိထားပါ။
ယခုအချိန်တွင် ရေကို အချိန်မှန်သောက်ရန် သတိရစေသည့် အက်ပ်များ သို့မဟုတ် ရိုးရိုးရေကို မကြိုက်ပါက အချိုမပါသော ဖျော်ရည်နှင့် အနံ့အရသာရှိသော ရေများကဲ့သို့သော အခြားသဘာဝအရည်များကို ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
များစွာရှိပါသည် စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားကို မြှင့်တင်ရန် အစားအစာများ စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေသဘောထားကို မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့အကြောင်း ပိုမိုသိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အစားအသောက်ပုံမှန် နေ့စဉ်
အန္တရာယ်မရှိဘဲ သင့်အစားအသောက်တွင် အသင့်တော်ဆုံးကို ရွေးချယ်ပါ။ အလေးချိန်တိုးလာသည် မလိုလားအပ်သော။
အောက်တွင် စားသုံးရန် အဓိက အစားအစာများ စာရင်းဖြစ်ပါသည်။ စွမ်းအင်တိုးမြှင့် နေ့စဥ် စိတ်နေသဘောထားနှင့် စွမ်းအင်နှင့် စိတ်သဘောထားကို မြှင့်တင်ရန် ဖော်မြူလာ:
Açaí (သင်မုန့်စားရန်ရွေးချယ်ပါက၊ သကြားမပါသောမုန့်ကိုအမြဲနှစ်သက်သည်)
သစ်အယ်သီးနှင့် ဗာဒံစေ့ကဲ့သို့သော ဆီထွက်သီးနှံများ
ပေါင်မုန့်၊ oatmeal၊ ထမင်း နှင့် အစားအစာများ အားလုံးကို စားပါ။ ကန်စွန်းဥတစ်နေ့တာအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် စွမ်းအင်ကို ပိုမိုထုတ်ပေးပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် ခွန်အားပိုရလိုသူများသည် ရွေးချယ်ခွင့်အချို့ရှိသည်။ ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့် ဒါမှ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်မယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။.
>>> ဖတ်ရန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်ရေအေရိုးဗစ်
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ ရှုပ်ထွေးသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို စားသုံးခြင်းသည် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို လေ့ကျင့်စဉ်တွင် ဆက်တိုက် စွမ်းအင်ရရှိရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက် ပို၍ စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေသဘောထားကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ အပူချိန်ထိန်းဓာတ်ဖြည့်စွက်စာဖြစ်သည်။
Thermogenic supplements များသည် အဆီပိုများကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး အရှိန်မြှင့်ရန် ကူညီပေးသော ဖြည့်စွက်စာများ ဖြစ်ပါသည်။ ဇီဝြဖစ် ဒီလိုနဲ့ ကူညီတယ်။ ကွမ်းခြံကုန်း tanto လေ့ကျင့်ရန် စွမ်းအင်ကို မည်သို့တိုးမြှင့်မည်နည်း။.
ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းကို စားသုံးသူများသည် လေ့ကျင့်မှုလုပ်ဆောင်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စိတ်သဘောထားနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် စွမ်းအင်များစွာကို ကုန်ဆုံးစေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ယခုအချိန်တွင်၊ Lipo6Black၊ Black Mamba ကဲ့သို့သော ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် စျေးကွက်တွင် ဖြည့်စွက်အားဆေးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို ရှာတွေ့နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဤထုတ်ကုန်ကို စတင်အသုံးပြုပြီးနောက် လေ့ကျင့်ခန်း၏နေ့စဥ်အလေ့အကျင့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပုံကို သင်သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။
Thermogenics များစားသုံးခြင်းအပြင် လိုချင်သူများအတွက် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခု စွမ်းအင်နှင့် စိတ်သဘောထားကို မြှင့်တင်ပါ။ လေ့ကျင့်ရန်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းအကြိုဖြည့်စွက်စာများ စားသုံးရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် အမှုကိစ္စဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ် နှင့် beta-alanine တို့ဖြစ်သည်။
O ဖြည့်စွက် beta-alanine သည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားကို မြှင့်တင်ရန် အားဖြည့်ပေးသည်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ရန်။
ဤအမိုင်နိုအက်ဆစ်သည် ပြင်းထန်မှုမြင့်မားသော လေ့ကျင့်ခန်းများကို လေ့ကျင့်ရာတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးကာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ရွှေ့ဆိုင်းကာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကြွက်သားများ ဒဏ်ရာရခြင်းကို လျှော့ချပေးသည်။
ဒုတိယအစွန်အဖျား ခွန်အားနှင့် ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် ဖြည့်စွက်စာများ လေ့ကျင့်ခန်းက Creatine က ATP ပိုထုတ်ဖို့ ကူညီပေးတဲ့ လေ့ကျင့်ချိန်မှာ စွမ်းအင်ပိုရဖို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ဖြစ်စေမယ့်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ ကြွက်သားများအတွက်။
ဤစွမ်းအင်ရင်းမြစ် အမျိုးအစားသည် ကြွက်သားများအား ပြင်းထန်မှုရှိသော ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေကာ အချိန်တိုအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်၊ ဗီတာမင်အေသည် စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားကို မြှင့်တင်ပေးသည်။.
အချို့သော အလေ့အကျင့်များသည် စွမ်းအင်နှင့် နေ့စဥ် စိတ်နေသဘောထားကို တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် ကူညီပေးသည်၊ ထိုအရာများသည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန် အလွန်လွယ်ကူသော၊
မျှတပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာရှိခြင်း- ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို အားကောင်းစေပြီး တစ်နေ့တာလုံး ပိုကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံနဲ့ စီရီရယ်တွေလို သဘာဝအစားအစာတွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဆိုဒီယမ်နဲ့ သကြားဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို ဖယ်ထားလိုက်ပါ။
စောစောအိပ်ယာထခြင်း- စောစောထတဲ့အခါ တစ်နေ့တာလုံး စိတ်ခံစားချက်နဲ့ စွမ်းအင်တွေ ပိုရလာတယ်၊ အထူးသဖြင့် သင့်ဦးနှောက်က နိုးထရလွယ်ကူပြီး အလုပ်၊ စာကျက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့တာလုံး ပျော်ရွှင်နိုင်တာကြောင့်ပါ။
စောစောအိပ်ရာဝင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်- လူတော်တော်များများက ကောင်းကောင်းအိပ်ရေးမဝတာ၊ အိပ်ချိန်နောက်ကျတာနဲ့ စောစောထတာက အမြဲတမ်းမောပန်းပြီး နေမကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ စောစောအိပ်ဖို့နဲ့ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၈ နာရီ အိပ်ဖို့ အမြဲကြိုးစားပါ။
>>> ဖတ်ရန် Biotin - Now Foods (5000mcg - 100 capsules)
O စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားကို မြှင့်တင်ရန် အားဖြည့်ပေးသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာ သင့်တစ်နေ့တာလုံး စိတ်ခံစားချက်နဲ့ စွမ်းအင်ပိုရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Thermogenics များသည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ3မှာ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်သည်ကို သင်သိပါလိမ့်မည်။
စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိလိုသူများ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုရရှိလိုသူများအတွက် ထိရောက်မှုအရှိဆုံး ဖြည့်စွက်ထုတ်ကုန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနက်ရောင် mamba ဝယ်.
၎င်း၏ကျော်ကြားမှုကြောင့်၊ ၎င်းသည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်အရှာဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး Lipo6Black နှင့်အတူဖြစ်သည်။
အနက်ရောင် mamba ဝယ်
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စိတ်ခံစားချက်နှင့် စွမ်းအင်ကို တိုးစေသော Thermogenic ဖြည့်စွက်စာတစ်မျိုး၊ ၎င်းကို အခြေခံထားသည်။ ကော်ဖီဓါတ် အထူးသဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ပိုကောင်းအောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ lipo6အနက်ရောင်ဝယ်ပါ။.
lipo6အနက်ရောင်ဝယ်ပါ။
သိဒ္ဓိဖြစ်ခြင်းအပြင် အဆီလောင်ကျွမ်းစက်သို့မဟုတ် black viper ဝယ်သည်ကဖိန်းဓာတ်နှင့် ephedra ကိုအခြေခံထားသည့် ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် စွမ်းအင်ပိုမိုယူဆောင်လာရန် ကူညီပေးသည်။
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်၌ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။
သင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်း၊ သင်အလိုရှိသောလူပမာဏ စွမ်းအင်တိုးမြှင့် COVID ပြီးတဲ့နေ့တွေမှာ ကြီးပေမယ့် အများစုက ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။
ဤစာပိုဒ်တွင်၊ တိကျသောဖြည့်စွက်စာများအသုံးပြုခြင်းအပြင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ကောင်းစွာစားခြင်းနှင့် ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်းကဲ့သို့သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပုံအကြောင်း အနည်းငယ်ပိုမိုသိရှိလာခဲ့သည်။
ဒီနေ့ရဲ့ How ဆောင်းပါးကို သင်နှစ်သက်ပါသလား။ စွမ်းအင်တိုးမြှင့် Covid ပြီးတဲ့နေ့တွေမှာ
Tags:စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားကို မြှင့်တင်ရန် အစားအစာများစွမ်းအင်တိုးမြှင့်စွမ်းအင်နှင့် စိတ်သဘောထားကို မြှင့်တင်ပါ။အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်တစ်နေ့တာ စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။လေ့ကျင့်ရန် စွမ်းအင်ကို မည်သို့တိုးမြှင့်မည်နည်း။စွမ်းအင်နှင့် စိတ်သဘောထားကို မြှင့်တင်ရန် ဖော်မြူလာအရေးကြီးသောစွမ်းအင်ကို တိုးပွားစေသောအရာက အဘယ်နည်းစွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားကို မြှင့်တင်ရန် အားဖြည့်ပေးသည်။ခွန်အားနှင့် ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် ဖြည့်စွက်စာများဗီတာမင်အေသည် စွမ်းအင်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားကို မြှင့်တင်ပေးသည်။